Ingabe ukuhlaziywa kwe-hemoglobin ye-glycated kunolwazi ngesikhathi sokukhulelwa? > Isifo sikashukela
Ingabe ukuhlaziywa kwe-hemoglobin ye-glycated kunolwazi ngesikhathi sokukhulelwa?
Ake ungitshele, ingabe ukuhlaziya kwe-hemoglobin ye-glycated kunolwazi ngesikhathi sokukhulelwa?
Isimo yilesi: ushukela ngeviki le-12 5.1, ku-16 - 5.2. Bathe bazohlola isivivinyo ngomthwalo weglucose. Ngiyazi ukuthi lokho kubukeka sengathi kuyahlanya, kepha ngiyamesaba kakhulu. Ngokukhulelwa kokuqala, ngangigula kakhulu kulokhu kuvivinywa (ushukela wawungama-4.8 kusuka emthanjeni, nganginamehlo futhi ayindilinga), manje ngisahlukumezeka, futhi kuphela i-toxicosis eyaqala ukukhipha ... Ngokuvamile, udokotela wami wezempilo owayelala nokubeletha waxwayisa ukuthi kuhlaziywe i-glyc. 4.74%. Ngabe umphumela omuhle lo?
Umbuzo kuphela odokotela ...
Bangitshele lapho bekhulelwe ukuthi ubengenalo ulwazi. Ngakunika ngemuva.
Futhi unhlobo lokuba nezinombolo ezinhle.
Futhi ngokwesibonelo, ekukhulelweni kwami ​​ekuseni, ushukela wawumuhle kakhulu, kepha kusukela ekudleni kwavuka kakhulu.
Ngabuka umsoco ((
Akudingeki ukuthi uvivinye, ngoba sesivele sine-diagnostic ye-glucose esheshayo: isifo sikashukela sokukhulelwa bese siya kudokotela we-endocrinologist. Okuqukethwe kwe-hemoglobin ye-glycated kunqunyelwe kakhulu ekuxilongeni i-mestitus yesifo sikashukela somzimba futhi ngoba isetshenziselwa i-PGTT, ukuhlolwa kuphephile ngokuphelele, noma kungenampilo :)
Ngabe ushukela 5.1 mubi?
Sengikudlulisile)) 4,44% umphumela
Futhi kusho ukuthini 'ukubonwa' yisazi se-endocrinologist? Ngiyaqonda ukuthi kusazoba khona ukwelashwa kuze kube ushukela ungaphansi kuka-7 esiswini esingenalutho ...
Uhlala njalo uhlukaniswa ngokwezimpendulo zakho nge-GDS (sengibhale okuthile ushukela lapha). Ngabe i-5.2 ngempela i-100% GDM? Kwabaningi, igxuma nje bese ivumelanisa nokujwayelekile ... noma ayikhuli ...
I-Yulichka, manje yebo .. izinkambiso zincishisiwe kwabesifazane abakhulelwe ...
I-Natalia Mironova eSwitzerland, okujwayelekile kufinyelela ku-5.5 ngesisu esingenalutho.
Kufika kuma-10 ngemuva kwamahora angama-1-2.
Ngemuva kwamahora ama-2 ngaba nehora eliphakeme kunama-cherries, ngakho-ke imitha yakhishwa.
U-Yulichka Karpova kuvela ukuthi uma ulingana nesisu esiswini esingenalutho, khona-ke kungenzeka ukuthi awazi ngesifo sikashukela esisebusweni ... Noma ingabe ukuhlolwa kweglucose kunikezwe wonke umuntu ngaphandle kokukhetha?
Natya yebo, ngibona kungcono ukukwenza ngesilinganiso ngemuva kwehora elingu-1 nangemva kuka-2.
Ngemuva 2 ngibe nayo ephakeme ukwedlula emva 1 ihora.
Uma eke walinganisa futhi angazi ukuthi nginenkinga nengane izokuhlupheka ((
Futhi ngakho-ke ngakulawula ukudla futhi kwavele kwaba ilayisi nama-apula, ushukela wami wandizela esikhaleni ((